7 Waxyaabaha tahay in aad sameyso ka hor inta soo afjarno Android Devices
Afjarno qalab Android aad kuu ogolaanaysaa inaad hesho agagaarka xadka dhigay aad soo saaraha. Waxaad tahay inay awoodaan inay ka saarto bloatware, ilaa aad telefoon dedejiyo, rakibi version dambeeyay, iftiimiyo ROM ah, iyo in ka badan. Haddii aad go'aansato in ay ku boodaan in habka xididka, waxaa jira 7 wax waa in aad ka hor soo afjarno qalabka Android aad samayn.
1. kaabta Your Device Android
Ma ogid waxa dhici doona inta lagu guda jiro geeddi-socodka rooting ah. Si looga fogaado khasaare xog kasta, samaynta gurmad ah u qalab aad muhiim u ah oo loo baahan yahay waa quruxsan. Hubi qalabka Android sida loo raad raac >>
2. Battery yahay waa in a
Ha is illowsiin heerka batteriga qalabka Android aad. Afjarno laga yaabaa saacadood oo shaqo ah u newbie ah. Waa macquul in aad Android ku geeriyooday habka rooting ay sabab u tahay batari miiro. Sidaa darteed, hubi in aad batteriga ayaa lagu eedeeyay in ay 80%. Sida habboon, Waxa aan ku talinayaa batari 100% lagu eedeeyay.
3. Ku rakib lagama maarmaanka ah Driver for Your Device Android
Hubi in aad leedahay download oo lagu rakibay darawalka lagama maarmaanka u ah qalab Android kombiyuutarka. Haddii aan, download darawal ka website-ka rasmiga ah ee soo saaraha. Intaa waxaa dheer, waa in aad awood u Debug USB qalabka Android aad. Haddii kale, waxaad aan rujin karo.
4. Hel ku habboon afjarno Habka
Habka rooting A sameeya ganaax hal qalab Android, taas oo macnaheedu ma aha in uu kuu shaqeeya. Waa in aad si cad u ogaato oo ku saabsan gaarka ah qalab. Sida laga soo xigtay qalab gaar ah, aad u hesho hab Suite soo afjarno ah.
5. Read iyo Watch soo afjarno Tutorial
Waa wax weyn, inaad u akhrido articles badan oo ku saabsan Casharrada rooting oo aad maskaxda ku hayso. Taas ayaa ka dhigaysa in aad is dajiyaan oo ay ogaadaan habka rooting dhamaystiran. Daawo qaar ka mid ah tutorial video haddiiba la hayo oggolaanshaha xaaladda. Tutorial video A had iyo jeer waa ka wanaagsan yahay erayo fudud oo cad.
6. Baro Sida loo Unroot
Fursadda in laga yaabo in aad qabto dhibaato ku soo afjarno oo aad rabto inaad unroot si ay u helaan wax walba oo ay caadi. Si aad wax ka hor wakhtigaas, aad haatan ka raadin kartaa internet-ka si aad u yaqaan qaar ka mid ah talooyin ku saabsan sida loo unroot qalab Android aad. Dhab ahaantii, qaar ka mid ah software rooting sidoo kale u oggolaadaan in aad unroot qalab Android.
7. Disable Adda iyo Brannmur on Your PC
Qaar ka mid ah Mudanayaasha antivirus ama brannmur habka rooting aad faragelin laga yaabaa. Sawirka dhammaan faylasha in aad soo bixi u soo afjarno sida ay u arki karo in furin ama virus. Ka sokow, gab aad antivirus ama ka hor soo afjarno brannmur.
Taasi 7 wax in la sameeyo ka hor soo afjarno Android. Haddii wax walba uu helo diyaar, waxaad samayn kartaa bilaabaan in ay ka rujin qalab Android aad .